GPS Navigation bụ anya - emelitere
ajụjụ GPS Navigation bụ anya - emelitere
1 afọ 10 ọnwa gara aga - 1 afọ 8 ọnwa gara aga #521 by Gh0stRider203
M chọpụtara na ọ na-eme nke a a bit ọzọ mgbe ebe a n'oge na-adịbeghị. Odigh mgbe ya n'ihu 2017 ......
Ị pụrụ ịhụ track m na-azọrọ na e-ewere, mgbe ahụ, dị nnọọ n'ebe ugwu ya, My track n'ime DFW, na mgbe ahụ My Ugbu A track ka LFRG, n'ebe ugwu nke na.
M na a na ọnwụ maka ihe mere ọ na-eme ya. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ofufe kwesịrị ekwesị track azụ na-apụta ọtụtụ ugboro n'ụzọ zuru okè, na mgbe ahụ, e ugboro na ọ bụ dị Nope! BỤGHỊ eme ya .....
My ọdịda na DFW dị nso zuru okè. nri na ntụpọ, na a ụmụ ọnụego -.37 ft / sec na touchdown (aga n'ihu .... ekworo akpa ọchị)
Onye ọ bụla ihe ọ bụla?
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 8 ọnwa gara aga Gh0stRider203.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #524 by Dariussssss
Ọfọn, ị messed elu ihe.
Ndi na ị tinker ihe ọ bụla banyere uzo, mgbe gbapụ? M f i mere, FSX ga ọgbaghara dum ụgbọ elu atụmatụ, na ezi mgbe akpọghachite ụgbọelu mbụ ụzọ-ebe. Ma ọ bụ, ịgbanwee HDG mode kama GPS / FMC. Ọ bụ ya mere m na-elele na abụọ ịlele uzo iji jide n'aka na e nwere mba njehie ma ọ bụ ụfọdụ crazy ibe ma ọ bụ ihe ọ bụla dị ka ya.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #526 by Gh0stRider203
akpa ọchị Nope. Adịghị m agbanwe agbanwe a ihe ọ gwụla ma m nwere ka ịgbanwee si VFR ka IFR ruru ebe ịbụ IFR na na mgbe ahụ, m na-ama na kọntaktị na ụlọ elu.
Adịghị m ịnọ na-ekporopụ na FSX n'oge ndị a ogologo flights. M na-eme ndị ọzọ stof, dị ka play World warships (nke m na-eme ugbu a akpa ọchị)
1 afọ 10 ọnwa gara aga #527 by Dariussssss
... na m nwere a ole na ole '' n'elu ọdọ mmiri '' flights, n'ezie otu nnọọ ogologo KPHX-LYBE na ugbo elu bụ ntụpọ na, nri ebe ọ kwesịrị. Abụghị m enwe ike ime dum ụgbọ elu otu mgbe, otú ahụ ka m mere ya na a ole na ole akụkụ. Zọpụtara na ụfọdụ ebe wee na mgbe m enwetaghị oge ụfọdụ. Dị ka m kwuru, ọ bụ ịnọ na on.
Ọ ga-ekwe omume n'ihi na ị na-eziga m na ụgbọ elu plan? (FB ma ọ bụ e-mail) m ga-agbalị ime ya. Nke ugbo elu ị na-eji na ihe a?
1 afọ 10 ọnwa gara aga #528 by Gh0stRider203
ejikari nke a abụghị ihe nke ......
M na-eme KDFW - LFRG na 747-400LCF n'ihi na eziokwu na ọ bụ nso max nso, a pụtara mfe obibia (mgbe ị na-runway 12 akpa ọchị), na dị ka a N'ihi ya, m na-eme ihe ndị kasị ego maka VA na a ụgbọ elu .
M na-mmasị a zip faịlụ na 3 atụmatụ m na-eji.
KDFW - LFRG VFR na runway 12 & 30, na IFR na runway 30
Aha faịlụ: KDFW-LFRG.zip
1 afọ 10 ọnwa gara aga #529 by Dariussssss
Ọ DỊ MMA. M ga-eme ya ubé dị iche iche, na a nkịtị 747ERF.
Ọ bụ nnọọ ihe ijuanya m iji ndị dị otú ahụ a ụgbọ elu na VFR ... ma eleghị anya, nke ahụ bụ ebe njehie bụ ... Agbanyeghị, m ga na-agbalị ya.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #531 by Gh0stRider203
99.999% nke My flights bụ VFR na KDFW - LFRG bụ naanị ụzọ m nwere nsogbu a na. M na-adịghị amasị IFR. M pụtara ihe bụ mgbe na-eme IFR na VFR ihu igwe, mgbe ị na-dị nnọọ etinyecha ịkagbu ya na agbanyeghị mgbe na-ahụ-anya?
1 afọ 10 ọnwa gara aga #532 by Dariussssss
99.999% nke My flights bụ IFR, na ATC, n'agbanyeghị na ọ bụ manụ dị ka hell, ma m na-eme m kasị mma na-edebe ya dị ka ezi uche dị ka omume.
N'ihi ya, anya ọma, ụgbọelu bụ nri na na egwu.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #533 by Gh0stRider203
M ga-eme na .... ma na-amasị m na-ehi ụra M ga-ekwe ka unu tinye awa
Gịnị mere m ofufe nke ukwuu? ọma maka otu .... Nke a bụ ihe m mere nnọọ na April.
Nke abuo, na m na naanị otu onye na-efe efe ugbu a maka VA, na ugbu a na mmefu anyị bụ $ 961,250 na leasing ịkwụ ụgwọ a ọnwa maka 2 Pax nnụnụ (ma na-a 777-200LR), na $ 1,258,334 a ọnwa maka 2 freighters (747 -800F).
Ọ bụ ruo Me iji jide n'aka na anyị na-ewetara na-ezuru onye ọ bụla ọnwa na-ekpuchi na na-eme ka $ mkpa iji na-akwụ ha.
1 afọ 10 ọnwa gara aga - 1 afọ 10 ọnwa gara aga #534 by Gh0stRider203
M mere nanị ihe karịrị 300K nm ikpeazụ nke ọnwa, na Chineke maara otú ọtụtụ awa akpa ọchị
Ọ bụ eleghị anya ọ bụghị na-etinyecha-eme maka gị. Ọ bụghị mgbe niile na-eme ya maka Me. Ọ bụ kpam kpam random
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 10 ọnwa gara aga Gh0stRider203.
Oge ike page: 0.286 sekọnd